एक पुरुषका दुई श्रीमती, भन्छन्: ‘प्रेम र विश्वास भए सबै सँगै मिलेर बस्न सकिन्छ’ – " सुलभ खबर "
एक पुरुषका दुई श्रीमती, भन्छन्: ‘प्रेम र विश्वास भए सबै सँगै मिलेर बस्न सकिन्छ’
एजेन्सी। मानिसहरु घरमा श्रीमती भएर पनि बाह्य सम्बन्धमा हुन्छन्। यसले परिवारलाई भाड्ने काम गर्दछ । बाह्य महिलासँग श्रीमानको सम्बन्धबारे थाहा पाउँदा श्रीमतीहरु रिसाउँछन्। सामाजिक रुपमा यस कार्य स्वीकार्यसमेत छैन । तर, थाइल्यान्डकी ३२ वर्षीया वारिसारा पोक्रिचान आफ्ना श्रीमानका कान्छी श्रीमतीसँग मिलेर बसेकी छन्। उनीहरु दुवै साथीजस्तै छन् । ४२ वर्षीय मानोप नुटायोथिनले १० वर्ष अगाडि पोक्रिचानलाई दोस्रो श्रीमतीको रुपमा विवाह गरेका थिए। मानोपको पहिलो श्रीमतीको नि’ध’न भएको थियो।
तर मानोप बाह्य महिलासँगको प्रेममा परे। बाह्य सम्बन्धकाबारेमा थाहा पाउँदा पोक्रिचान रिसाइनन् । उनले आफ्ना श्रीमानका पे्रमीका २६ वर्षीया नाटया टोङपानलाई घरमा स्वागत् गरिन्। मानोप र नाटयाले पोक्रिचानकै सहयोगमा विवाह गरे। यतिबेला दुवै श्रीमतीको साथमा मानोप एकै घरमा बस्दै आएका छन्। उनीहरु निकै खुशी छन्। तीनै जना मिलेर काम गर्छन्। घर खर्च जुटाउँछन् ।
मानोप कार व्यापारी हुन्। दुवै श्रीमती कार व्यापारमा मोडलका रुपमासमेत काम गर्छन् । मानोप परिवारको ९ सन्तान छ। पहिलो श्रीमतीबाट ३ सन्तान, पोक्रिचानबाट ३ सन्तान र नाटयाबाट ३ सन्तान छ। उनीहरु सबै मिलेर ९ सन्तानको हेरचाह गरिरहेका छन् ।
थाइल्यान्डमा एक श्रीमान र दुई श्रीमती सँगै खुशीका साथ बसेका छन् भन्नेबारे सार्वजनिक भएपछि उनीहरुलाई टेलिभिजन कार्यक्रममा आनन्त्रितसमेत गरिएको थियो। उनीहरुले त्यहाँ भनेका थिए,‘प्रेम र विश्वास भए सबै सँगै मिलेर बस्न सकिन्छ।’
घडिको रोचक तथ्य: विज्ञापनमा देखाइने सबै घडीको समय किन १० बजेर १० मिनेट देखाईन्छ ?
तपाईंले घडी लगाउनुभएको छ ? अनि टेलिभिजन तथा अनलाइन पत्रपत्रिकामा आउने घडीको विज्ञापन हेर्नु भएको
ब्रेकअपपछि यी गल्ती भूलेर पनि नगर्नुहोस्
काठमाडौँ । महिला र पुरुषबीचको सम्बन्ध जोडिदा जति खुशी मिल्छ, त्योभन्दा बढी सम्बन्ध टुट्दा पीडा
काठमाडौँ । प्रेम एक यस्तो आर्कषण हो जहाँ केहिबेरको भेट वा कुराकानीले पनि ठूलो महत्व
पीडा त पुरुषलाई पनि छ !
अस्ति भर्खरै नोभेम्बर १९ मा International Men’s Day मनाइयो । खासै चर्चा त यस्को भएको
यदी तपाइको शरीरको यी अंग चिलायो भने हुनेछ छिट्टै धन लाभ!
शरीरको कुनै पनि भाग चिलाउनु एक सामान्य शारीरिक गतिविधि हो जुन कुनै पनि समय कहिँ
काठमाडौं । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर यो सत्य हो । जुन अनौठो मानव सेवाका